स्कुटी अनियन्त्रित भएर प,ल्टिँदा २४ वर्षिया स्वोराले सँसार छाडिन् – PathivaraOnline
Home > समाचार > स्कुटी अनियन्त्रित भएर प,ल्टिँदा २४ वर्षिया स्वोराले सँसार छाडिन्
admin October 2, 2020 समाचार, समाज	0
बुटवल । दुर्घटनामा आज एक युवतीकाे असमायिक निधन भएकाे खबर छ । बुटवलमा स्कुटी अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा घा,ईते भएकी एक यु,वतीको मृ,त्यु भएको छ। बुटवल –९ मिलनचोकबाट बसपार्कतर्फ जाँदै गरेको लु ४४ प ६११६ नं. को स्कुटी अनि,यन्त्रित भएर घा,इते भएकी तिलोत्तमा नगरपालिका–२ जानकीनगरकी २४ वर्षकी स्वोरा प्रधानको उपचारको क्र,ममा मृ,त्यु भएको हो। समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता खड्क बहादुर खत्रीका अनुसार उनको उप,चारको क्रममा बिहीवार दिउँसो क्रिमशन अस्पतालमा मृ,त्यु भएको हो। स्कुटीको पछाडि बसेकी उनी न्यू होराईजन कलेजमा एम.बि.एस. तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत थिईन्। दुर्घ,टनामा परी स्कुटी चालक जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ का २६ वर्षीय सन्दिप श्रेष्ठ घा,इते भएको प्रह,रीले जनाएको छ।
केरुङ नाकामा लत्ता-कपडा सबै रोकियो
काठमाडौं । करिब एक वर्षबाट केरुङ नाकामा लत्ता कपडा लगायतका सामान रोकिँदा महाबौद्धका थोक व्यापारीहरु मारमा रहेका छन । कोभिड—१९ संक्रमणको जोखिमका कारण केरुङ नाकाबाट सहज ढुवानी नहुँदा एक वर्षदेखि लत्ता कपडा लगायतका सामान रोकिएका छन । दशैं नजिकिँदै गर्दा पनि पसलमा नयाँ सामान थप्न नपाउँदा त्यहाँका व्यापारीहरु चिन्तित बनेका छन ।
संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लक डाउनका कारण उपत्यकाका खुद्रा व्यापारी समेत विस्थापित भएपछि थोक विक्रेताहरुको व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
उपत्यकाका खुद्रा व्यपारी पनि नआएको र बाहिरबाट पनि नियमित रुपमा बस सञ्चालन नहुँदा व्यवस्या सञ्चालनमा समस्या देखिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । गत वर्षको मंसिरमा काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने सामान अहिलेसम्म केरुङ नाकामै रोकिँदा व्यवसायीहरुमा थप चिन्ता छाएको छ ।
बैंकको ऋण किस्ता र व्याज तिर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको उनीहरुको भनाई छ । अहिले स्थानीय व्यापारमा ८० प्रतिशतसम्म कटौती भएको र उपत्यका बाहिरको व्यापारमा ६० प्रतिशत कमि आएको महाबौद्धका व्यापारीहरुको भनाई छ । दशै लगाडी केरुङ नाकाबाट सामान आउन सक्ने अवस्था नभएकाले पुरानो स्टक भएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
भोलि काठमाडौंका यी स्थानमा बत्ति काटिने ! कहाँ कहाँ आउदैन बत्ती? हेर्नुस्
काठमाडौँमा कतै बम आतङ्क कतै राँगो आतङ्क: मान्छे मारेपछि प्रहरी इन्काउन्टर